Technology Archives - SAMACHAR SANJAL
घरमा बसी बसी पैसा कमाउनको लागि फोटोमा क्लिक गर्नुहोस !!!!
February 16, 2018 admin>
केतपाईं लेख्न रुचाउनुहुन्छ ? के तपाई आफ्नो लेखलाई घर बसी–बसी कमाउने माध्यम बनाउन चाहनुहुन्छ ? त्यो पनि लाखौंमा ! त्यसो भए आजैबाट लेख्न थाल्नुहोस् । अनलाइनका माध्यमबाट तपाईं आफ्नो लेखलाई नगदमा परिणत गर्न सक्नुहुन्छ । इन्टरनेटको पहुँच, फेसबुक, ट्विटरजस्ता सामाजिक सञ्जालले पाठकसम्म लेख पुग्ने सहजता तथा गुगल एडसेन्सलगायतका विज्ञापनदातासँग सहजै जोडिन सकिने कारणले लेखबाट घर बसी–बसी सजिलै कमाउन सकिने भएको हो । सुरुवात कसरी गर्ने ? यसका लागि सुरुमा गुगलको ब्लगर, वर्डप्रेसजस्ता निशुल्क साइटमा एकाउन्ट बनाउनुपर्छ । त्यसपछि त्यहाँ आफ्नो चाहनाअनुसारको ब्लग डिजाइन गर्नुपर्छ र लेख्न थाल्नुपर्छ । कमाउनका निम्ति…
January 19, 2018 January 19, 2018 admin>
तुलसीपुर । तुलसीपुरको एक मोवाइल पसलमा चोरी गर्ने बालकलाई प्रहरीले पक्राउ गरी सार्बजनिक गरेको छ । बिपीचोक नजिकै रहेको सगरमाथा इलेक्ट्रोनिक्स पसलमा चोरी गर्ने तुलसीपु उपमहानगरपालीका १० गोलौरीका १७ बर्षिय शिवराज चौधरीलाई प्रहरीले बिहिबार चोरी गरेको समान सहित सार्बजनिक गरेको हो । पत्रकार सम्मेलनमा प्रहरीले बिभिन्न कम्पनीका र मोडलका मोवाईल फोन, पेनड्राइभ, मेमोरी कार्ड, , ब्याट्री र नगद १ हजा ६ सय १५ रुपैयाँ सहित बालकलाई सार्बजनिक गरेको छ । चौधरीले बिहिबार विहान ४ बजेको समयमा पसलको ताला काटेर नगद सहति २ लाख ३६ हजार ६ सय ६५ रुपैयाँ बराबरको…